Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2019 May 10
10 Mey 2019
Tantara tamin'ny 10 Mey 2019
Fanehoan-kevitra isan-karazany manoloana ny drafitr'i Trinidad sy Tobago hampiaty ireo mpifindramonina Venezoeliana ho ara-dalàna
Manomboka amin'ny fanararaotana ireo mpitsoa-ponenana hatramin'ny fitomboan'ny heloka bevava feno herisetra. Maneho hevitra isan-karazany i Trinidad sy Tobago manoloana ireo venezoeliana mpifidramponina tsy mitsahatra tonga ao aminy.
Nobaikon'ny manampahefana ogandey haaton'ny sehatra media miisa 13 amin'ny asany ireo ekipa mpitati-baovaon'ny olomalazan'ny fanoherana
Nandrahona avy ao ny UCC hanao hetsika hamelezana ireo tranom-baovao tsy manaiky ny hanaraka ny baiko, izay tonga hatramin'ny fampanantenana hanafoana ny lisansa na hotapahina vonjimaika ny programan-dry zareo.
Tongasoa indray eto amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiorda! Eo am-piandrasana ny fifidianana iankinan'ny hoavin'ny firenena...
Venezoela: Mpisera Facebook notànana noho ny fandefasana sary “manakorontana”
Mpanoratra Marianne Diaz · Venezoela
Roa andro taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tany Venezoela, nosamborin'ny manampahefana i Andrés Rondón Sayago izay voalaza fa nanaparitaka ny sarin'ireo biletàm-pifidianana nodorana. Nilaza ny manampahefana fa nalaina nandritra ny fifidianana ny taona 2007 ireo sary ireo fa tsy tamin'io fotoana io. Voampanga ho nizara ny sary tamin'ny "fikasana hanakorontana" i Rondón...